Sorona Masina ny 12/02/2019 - Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 12/02/2019
Jen. 1, 20 — 2, 4a
Andeha isika hanao olona mitovy endrika amintsika, mifanahaka amintsika.
Hoy Andriamanitra: “Aoka ny rano ho be zava-manan’aina mihelotrelotra; ary aoka ny vorona hanidina ambonin’ny tany, eny amin’ny habakabaky ny lanitra.” Dia noarîn’Andriamanitra ny biby vaventy anaty rano, sy ny zava-manana aina mihetsiketsika rehetra mihelotrelotra anatin’ny rano, samy araka ny karazany avy, mbamin’ny voro-manidina manana elatra rehetra araka ny karazany avy. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. Dia nitso-drano an’ireo Andriamanitra nanao hoe: “Miteraha maro sy mitomboa ary mamenoa ny ranomasina; ary aoka ny vorona hihamaro eo ambonin’ny tany.” Dia nisy hariva ary nisy maraina; izay no andro fahadimy.
Hoy Andriamanitra: “Aoka ny tany hamoaka zava-manana aina, araka ny karazany avy, dia ny biby fiompy, ny biby mikisaka sy ny bibin’ny tany, araka ny karazany avy.” Dia tanteraka izany. Nataon’Andriamanitra ny bibin’ny tany, araka ny karazany avy, sy ny biby fiompy araka ny karazany avy, mbamin’izay rehetra mikisaka amin’ny tany, araka ny karazany avy. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany.
Rahefa izany dia hoy Andriamanitra: “Andeha isika hanao olona mitovy endrika amintsika, mifanahaka amintsika, ka aoka hanjakany avokoa ny hazandrano ao amin’ny ranomasina, ny voromanidina eny amin’ny habakabaka, ny biby fiompy sy ny tany rehetra, ary ny biby mandady mikisaka amin’ny tany.” Ary Andriamanitra nahary ny olona mitovy endrika aminy; mitovy endrika amin’Andriamanitra no nahariany azy, ary nataony lahy sy vavy izy ireo. Dia nitso-drano azy ireo Andriamanitra ka nanao taminy hoe: “miteraha maro, mitomboa, mamenoa ny tany, ka mizakà azy; ary anjakao ny hazandrano ao amin’ny ranomasina, ny voro-manidina mbamin’ny biby rehetra mihetsiketsika ambonin’ny tany.” Ary hoy Andriamanitra: “Indro omeko anareo ny anana mamoa rehetra eo ambonin’ny tany, mbamin’ny hazo rehetra misy voankazo manana ny voany ao aminy; izany no atao fihinanareo. Fa ho an’ny bibin’ny tany mbamin’ny voro-manidina sy izay rehetra mihetsiketsika eto ambonin’ny tany, ka manam-pofon’aina ao aminy, dia ny zava-maitso rehetra no omeko ho fihinany.” Dia tanteraka izany. Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ka tsara indrindra izany. Ary nisy hariva ary nisy maraina: izay no andro fahenina.
Toy izany no nahavitan’ny lanitra sy ny tany mbamin’izay rehetra momba azy. Ary tamin’ny andro fahafito dia efa vitan’Andriamanitra ny asa rehetra nataony. Ary Andriamanitra nitso-drano ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin’izany andro izany no nitsaharany tamin’ny zavatra rehetra noarîny tamin’ny nanaovany azy. Izay no tantaran’ny lanitra sy ny tany, rahefa voaary izy.
Salamo 8, 4-5. 6-7. 8-9
Fiv.: Ry Tompo Andriamanitray ô, drey ny harevaky ny Anaranao eran-tany.
Raha nahita ny lanitra nataon’ny tananao aho, ny volana, ny kintana izay namboarinao. Fa inona ny olona no mba tsiahivinao, ny zanak’olombelona he tsimbininao!
Fa lasa ambany kely noho ireo andriamanitra izy, ka heni-boninahitra izy nasondrotrao. Ny asan-tananao foinao hozakainy, ny zavatra rehetra eo ambany fiadidiany!
Dia omby aman’ondry omban’ny bibidia, ny biby izay mandady sy mandia izany tany; ny vorona eny an-danitra sy trondron-dranomasina izay miriaria sy mifaly eny ambonin’ny onja.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0207 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org